Zimbabwe Inocherechedza Zuva reKuwanisa Vanhu Mvura Yakachena Pasi Rose
Kurume 22, 2012
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vanoti matunhu akaita seMatabeleland neMasvingo, anofanirwa kuva nehurongwa hwemvura hwakasimba, sezvo matunhu aya achigara achiwana mvura yokunaya shoma nguva zhinji.
VaMugabe vataura mashoko aya pazuva rekucherechedza kuwanikwa kwemvura yakachena pasi rose, uye kuwanira vanhu chikafu chakakwana.
VaMugabe vati mvura chinhu chakakosha muhupenyu sezvo nguva zhinji hutano hwevanhu vanowana mvura yakachena hunenge hwakasiyana nehutano hweavo vasingawani mvura yakanaka.
Vatiwo munyika muchaita goho shoma gore rino sezvo mvura yakavhiringa zvirimwa zvakawanda.
Zvichakadaro, kanzuru yeMarondera inoti dambudziko rekushaikwa kwemvura mudhorobha iri richareruka munguva pfupi iri kutevera sezvo kanzuru yave kugadzirisa zvigayo zvayo zvemvura pamwe nekugadzira mapaipi anokweva mvura kubva kudhamu reWenimbi.
Kanzuru iyi inoti yakawana mamiriyoni gumi emadhora kubva kubazi rezvemari.
Bazi reZINWA rakaudza dare reparamende svondo rino kuti Zimbabwe iri kushandisa mvura inosvika zvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana kana kuti 25% chete.
Hurumende inoti haina mari yekuisa pombi dzinokweva mvura kubva kumadhamu, izvo zvopa kuti munharaunda dzakawanda vanhu vashaye mvura yekushandisa.
Sangano reUnited Nations rinoti Zimbabwe haisi yoga iri kusangana nedambudziko remvura iri. Pasi rose rave nevanhu vanosvika mabhiriyoni manomwe uye huwandu hwevanhu huri kuramba huchikwira zvopa kuti mvura irambe ichinetsawo.
Pasi rino munhu mumwe pavatatu anonzi anonetseka nekushaya mvura uye izvi zviri kuwanikwawo munyika dziri kuchamhembe kweAfrica.
Zimbabwe ine madhamu akawanda asi kutora mvura iyi kuendesa kuvanhu kuti vakwanise kurima kana kunwa mvura yakachena, chinhu chiri kunetsa.
Chiremba vanoshanda vakazvimirira, VaEdwin Chikati, vanoti kushaikwa kwemvura yakachena ndokopa kuti vanhu varware.
Mashoko aya atsinhirwawo naVaFarai Mageza vekusangano reYouth Agrarian Society avo vanoti zvinhu kumaruwa hazvina kunaka nenyaya yekushayikwa kwemvura.
Hurukuro naVaEllliot Chikati naVaFarai Mageza